Ndị igwe BMC dị mma? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Bmc ugwu igwe - otu esi edozi
Bmc ugwu igwe - otu esi edozi
Ndị igwe BMC dị mma?
N'ịbụ onye ọrụ arụmọrụ dị mma,BMCna-etu ọnụ na ya injinịa naekuteknụzụ. Ndị aanyịnya igwebụ aeziHọrọ ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị karịa ị bulie elu eluetitina upgrading mmiri dị ka ị na-aga, ma ọ bụ isi ọ bụrụ na ị na-ọzọ nsogbuetitikarịa logo na ndị na-agbanwegharị na brek.
10 Pinkbike na-ekwu maka onye ọ bụla nwere ike ịchọta acronym kacha mma maka ihe BMC pụtara. Sarah, ị maara ihe ọ pụtara n'ezie? Ha abụghị ihe okike n’ebe ahụ. - kelọ Ọrụ Na-arụpụta Bike.
Anyị chere na ọ bụ ntakịrị ihe na-atọ ụtọ, yabụ ọ bụrụ na ị nwere ihe ọ bụla na-atọ ụtọ karịa nke ahụ, biko mee ka anyị mara, ha nwere ike ịgbanwe ya dabere na nkọwa Pinkbike - Echeghị m na ha ga-eme ya. (Sarah chịrị ọchị) (obi ụtọ Tekno) - Ndewo mmadụ niile. Aha m bụ Sarah Moore na anyị nọ ebe a na Sun Coast maka Uru Bara Uru Bikes Field Trip Review.
Na m, nke a bụ BMC nke nwere okpukpu abụọ nke aluminom, nke na-ere maka $ 1,600. Anyị na-anwale ya na ụdị nke hardtail. BMC enweela ụfọdụ ndị agbụrụ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ na igwegharị igwe ha.
Gụnyere onye mmeri Olympic ugboro abụọ Julien Absalon ma ugbu a, ha abanyela aka ugbu a onye mmeri ụwa Pauline Ferrand-Prevot maka igwe kwụ otu ebe. Igwe kwụ otu ebe a na - adị ọsọ ọsọ, kwụsị, BMC kwuru na ọ bụ maka ịtọ ntọala nke aka gị na ugwu ahụ na ịnya ịnyịnya kwesịrị ekwesị maka egwu mpaghara gị. Nkọwapụta etiti ahụ na-agbagharị usoro ntanetị dị n'ime nke na-agbakwunye na nke a mara mma.
ihe eji eme ka nri
Ma e nwekwara a threaded ala mgbodo. Ọ na-abịa na obere nha site na nnukwu buru ibu, ha niile nwere 29 nke anụ ọhịa impellers. Otu n'ime igwe kwụ otu ebe ndị a na-abịa n'oche oche dị egwu, nke na-azọpụta ego, mana ọ bụghịkwa ihe a na-ahụkarị maka igwe kwụ otu ebe na-enweghị ọkwa oche mara mma.
Offọdụ n’ime igwe kwụ otu puku $ 10,000 ahụ, Trek Supercaliber, Cannondale Scalpel m nwalere n’ule a na-eme n’ofe, bịakwara n’enweghị ntụpọ mmiri. Igwe kwụ otu ebe a na-abịa na slam a ma enweghị headset spacer, nke onye na-agba ọsọ ga-amasị. Gaghị eme ka mkpịsị aka ọ bụla jiri igwe kwụ otu ebe a.
N’aka nke ọzọ, ọ bụ igwe kwụ otu ebe na, n’aka nke ọzọ, ihe ndozi fọk eji eme ihe, nke pụtara na aka gị agaghị agbacha karịa ogo 90. Ka anyị gaa jiometrị. Site na nkuku tube tube 67 na oche oche nke 75 degrees, nke ahụ nwere ike ọ gaghị ada dị ka onye na-eme ihe ike mgbe anyị jiri ya tụnyere igwe kwụ otu ebe ndị ọzọ na ụdị a.
Mana ọ bụrụ na anyị elele igwe kwụ otu ebe anyị nwere na ule ikpeazụ, ọ bụ n'ezie ọkara ogo ala karịa Epic pụrụ iche, nke anyị kwuru bụ geometry kachasị mma. E nwere ụdị abụọ nke aluminom nke ọnụọgụ abụọ ahụ na ọnụahịa bido na $ 1,200. Ọ bụrụ na ịchọrọ ụdị nke carbon, enwere ụzọ anọ ịhọrọ, yana ọnụahịa bidoro na $ 2,200.
Bikegbọ ịnwale anyị ebe a bụ BMC Abụọ Stroke AL ​​One, nke na-abịa na Rock Shox Recon, ndụdụ narị-millimita na mkpọchi mkpọchi na aka ahụ nwere SRAM NX, SX agwakọtara, Shimano Deore brekị, na Vittoria Barzo taya na obosara nke 2.25. Ọ na-efu $ 1,600 ma jiri kilogram 27, iri abụọ na abụọ.
Nke ahụ ezuru maka nkọwa. Ka anyị banye n'ime ihe ịchọrọ ịma gbasara otu o si aga n'okporo ụzọ (egwu) - Tupu anyị abanye ụzọ, gịnị ka ị ga-eji igwe kwụ otu ebe a? - Ya mere, ị guzobere ndụdụ Rock Shox dịka ọnụọgụ dị na ngwa Trailhead ha. Ya mere ngwa ngwa ha nwere, ị nwere ike iji ha ebe ahụ.
Na mgbe ahụ anyị na-etinye na taya ruo 21.23 PSI, dị nnọọ ka anyị mere na ihe ndị ọzọ nile anyịnya igwe - Enwere m ajụjụ n'agbanyeghị. Ka BMC wee rute ebe a, a ga-ejiri slam ya kpuchie ya na enweghị spseti.
Yabụ ọ bụrụ n'ịchọrọ ka aka ahụ dị elu, ị nweghị nhọrọ. Naanị mee yoga gị achọrọ m ịnya ịnyịnya ígwè a - Oh boy. (Mike chịrị ọchị) (ụda dị nro) - ọ dị mma, Sarah.
Yabụ BMC gụrụ ihe a dịka ọkwa siri ike ịbanye na mba. Yabụ n'ụzọ doro anya na ọ ga-adị mma na ịrịgo. Echere m, ọ na-adị ngwa ngwa ịnọdụ ala ebe ahụ.
Kedu nke na-eme? - Ee, ọ dị ka igwe kwụ otu ebe kachasị ọsọ m ga - asị. You makwaara, ọ bụghị naanị ile anya, ọ na-arịgo nke ọma. You makwaara na ọ dị nzuzu ikwu mana ọ bụ nke kachasị rụọ ọrụ nke ọma na ịrịgo - echeghị m na ọ bụ nzuzu.
Ya mere o doro anya na ọ nweghị nkwụsịtụ azụ ka ọ wee nwee mmetụta ọsọ ọsọ mana ọnọdụ ọ na-etinye gị, echere m na nke ahụ bụ ihe ị na-eche karịa, ọnọdụ ọ na-etinye gị na-agba gị ume ka ị sie ike ịbanye na pedal. Anọ m n’azụ ya. Ya mere amaara m nke ahụ. - Ee.
Yabụ mgbe ị nọ n'ọnọdụ ahụ dị ala, jiri ogologo osisi ahụ, ihe ịchọrọ n'ezie bụ ịzọ ụkwụ na ụkwụ ụkwụ, ị maara, ọ na-arụ ọrụ dị mfe, ị maara, dị nwayọ site na ferratas. Know mara, otu ụzọ ụkwụ gị na-atụ ogho. Ma ọbụlagodi mkpịsị ụkwụ ogologo, sterị ahụ ka edoghị anya na ọ chọrọ ịrịgo.
Know mara, ọ na-eme ịrị ugwu bụ ihe na-atọ ụtọ ịme. - Ya mere Sarah, ị gbagoro n’etiti BMC a na Vitus a. Ha bụ igwe kwụ otu ebe dị iche iche, emere maka ihe dị iche iche, ga-adị mma.
Ma gwa m ka ha abụọ si agba ịnyịnya, n'otu ụzọ, mgbe ọ ga-adị ntakịrị ma ntakịrị nwayọ - ee. Echere m na ị nwere ike ile ha anya wee kwuo na ị maara na hardtail bụ otu ihe, kedu ka ị ga-esi nwee mmetụta karịa nke ọzọ? Ma ọ bụ na geometry na BMC a bụ ihe na-eme ihe ike na ọ bụ naanị na ịchọrọ ịzọ ụkwụ na pedals mgbe ị nọ ọdụ n'ụgbọ ịnyịnya a. Ọ na-atọ ụtọ mgbe ị gbanwere azụ na azụ n'etiti Vitus na BMC, ndị Vitus na-enwe mmetụta nke ziri ezi.
Fọrọ nke nta ka gị, M mere ihe ọchị mgbe ụgbọala ya. Na mberede, m nọ na ngwakọ - Ogwe gị nwere ike idozi dị elu - Ee. M nwere wedata azuokokoosisi, ị mara- belata ya ntakịrị. - Ya mere, ee, nke a bụ a ọzọ omenala igwe kwụ otu ebe mgbe BMC dị nnọọ na-eche a bit, maa a otutu ihe ike ike. (egwu dị nro) - Ọ dị mma.
Yabụ na BMC bụ ihe doro anya na mba na-ele anya nke ọma. Agbụrụ agbụrụ na-agbadata ala ma agbụrụ agbụrụ ga-enwe mmeri ma ọ bụ furu efu na mbido igwe kwụ otu ebe na-enwe mmetụta ọdịnala karịa ya, ọbụlagodi na ọ nwere ọnụ ọgụgụ na-aga n'ihu na-aga n'ihu. Maka mba gafere, ọ bụ ihu ụzọ ụzọ iri isii na asaa, iri isii na asaa na ihu ihe ahụ.
Ihe m na-ekwu bụ na agbaala m ọtụtụ ịnyịnya ígwè ndị na-eme njem na-atụ anyị ụjọ. - Ọbụna Canyon Lux anyị gbara ịnyịnya nwere nkuku isi nke ogo 70. Yabụ nke ahụ bụ nnukwu ọgba tum tum dị iche.- Ee.
Ya mere, echere m na ihe anyị na-ekwu bụ na ee, o doro anya na onye na-eto eto nwere ike karịa ụmụ, mmiri na vitus - ọbụghị ntụnyere dị mma - ọ bụghị apụl na apụl atụnyere - ee. Na usoro nke njikwa, ma ọ bụrụ na a igwe kwụ otu ebe nwere a dropper post ọ ga-abụ a n'ezie obi ike ụmụ maka a cross-mba igwe kwụ otu ebe. - Mana ọ dị ka ị na-ekwu na ọ bụrụ na ihe a nwere post post, ọ bụghị jiometrị na-ejide BMC na ụmụ ala, ọ bụ? Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka igwe kwụ otu ebe, ihe m na-ekwu bụ na ọ bụ ihe dị ịrịba ama, nri? - Ee.
Ma ọ bụ ihe siri ike karịa karịa anyịnya igwe kwụ otu ebe anyị nwalere na mgbada. Ma ị ga-ahọrọ ahịrị gị nke ọma. Ọ bụrụ na ị na-anya ụgbọ ala siri ike, o yikarịrị ka ọ bụ gị, ịmara, gbapụ na offline, mana ihe ọ bụ - na-ekwuchitere gị Sarah.
Enweghị m nsogbu niile na onye na-eto eto. (ọchị) Ma ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka igwe kwụ otu ebe, m na-ekwu, ọ bụ onye nwere ikike ịrịgo maka ihe ọ bụla ọ bụ, nkwụsịtụ azụ ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ dị mma Sarah, ka anyị rụchaa mgbago ahụ na BMC wee rute nke a. cheta dị ka ihe ntinye-ọkwa ịgba ọsọ-agba ịnyịnya ígwè. Gini bu echiche ikpe azu gi banyere ihe a? - know maara ihe, ọ bụrụ na ị si na okenye na-agafe agafe igwe ma gbanwee ihe a, ọ ga-eme nnukwu ihe dị iche.
Dị nnọọ ka ọ bụ n'ezie a cross-mba igwe kwụ otu ebe na-eme n'ezie nke ọma na ala. Ọ dịghịkwa mma iji ya atụnyere onye na-eto Rocky Mountain ma ọ bụ ihe ọ bụla. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma na ịrịgo na nke ahụ bụ ihe ị ga-enweta na ọdịda. (egwu dị nro) - Ọ dị mma.
Ka anyị banye na akụrụngwa ma bido na ihe ị masịrị mbụ, Sarah - Enwere m mmasị na ndụdụ Rock Shox ndụdụ ndụdụ, 100 millimeters nke njem, mana ọ na-arụ ọrụ nke ọma. O nwekwara ndokwasa a handlebar, lockout. - Onye obula n’aputa O na - ekwu ‘Lockout na aka’? Chọghị nke ahụ, mana-- Maka ebumnuche ahụ, echere m na ọ bụ ihe ezi uche dị na ịchọrọ ị nọ na agbụrụ agbụrụ wee mechie ndụ gị.
Want chọrọ ịdị na-arụ ọrụ nke ọma. - Ziri ezi. Kpọmkwem.
Ya mere, olee ihe ndị ọzọ gbasara igwe kwụ otu ebe a nwere isi - echere m na taya ndị a nwere uche ịmara na ọ na - apụta ngwa ngwa. Ga-enwerịrị mmetụta na ịchọghị taya taya nke sara mbara karịa n'elu ugwu, ụdị igwe kwụ otu ebe. - Ọ dị mma.
Ka anyị kwuo maka ihe ndị na - amasịghị gị ugbu a, rue ihe mejupụtara ya, gịnị bụ ihe ahụ? - know maara na ọ nwere ngwakọta nke SX na NX nke na-arụ ọrụ nke ọma mana ọ bụghị dị ka ọsọ nke Deore 12 na ergonomics nke otu sibufe si arụ ọrụ, ọ bụghị na ọ dị nfe mgbe iji brakes Shimano ahụ jikọọ - Ee. Nke ahụ bụ ihe ebe a. Nke a, mgbanwe a, ọ dị na breeki Shimano na ọ siri ike iru, ọ bụghị ya? Eeh.
Echetakwara m na site na njem ọnụ ahịa ikpeazụ anyị mere. Ergonomics, ihe m na-ekwu bụ na mgbe ị zụrụ igwe kwụ otu ebe ị naghị enweta otu, yabụ o siri ike iji BMC tụnyere ndị ọzọ siri ike n'ihi na ha abụghị apụl apụl na apụl, ha bụ Sarah? BMC nwere ebumnuche dị iche iche karịa igwe kwụ otu ebe ndị a - ee, ọ naghị abịa post dropper. Yabụ ọ bụrụ na ị gbakwunye otu n'ime ndị a ọ dịkarịa ala $ 200.
Nke ọzọ, ị maara, mgbe anyị jiri ya tụnyere igwe kwụ otu ebe ndị ọzọ, ọ nwere nke a SX, NX drivetrain nke na-enweghị ezigbo ergonomics na obere mgbanwe dị mma karịa ụfọdụ igwe kwụ otu ebe ndị ọzọ na-abịa na 11- ma ọ bụ 12 - Gear Deore draịva kwadebere - Ee. Ọ na-arụ ọrụ. Ọ na-arụ ọrụ ya na ọ dịghị mkpa ịgbanwe ya ma ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ nke ọma.
Mana m na-ekwu, obi abụọ adịghị ya na ngwongwo a enweghị mmetụta dị ka ebe dị nso, ọkachasị mgbe ị na-enyocha ego. ihe m na-ekwu, ọ bụ ihe ntinye-larịị cross-mba ọduọ igwe kwụ otu ebe - ya mere na ị nwere ike ịbụ ịmafe n'okpuru ọkụ eletrik - kpọmkwem. Eeh. (egwu dị nro) - Echere m na nke a bụ nnukwu ọgba tum tum na-abanye, maka mmadụ na-abanye ịgba ọsọ.
Ọ ga - abụ ezigbo nhọrọ, ọ bụghị oke ọnụ, ị ga - enweta ezigbo geometry na - agbabeghị akụ. - Ee. Echere m na nke ahụ bụ uru kasịnụ nke ihe a bụ na ọ na-eji usoro mmụta dị mma, na-agafe agafe.
Amaara m na ọnụọgụgụ ndị ahụ, ha anaghị ele anya na akwụkwọ, mana maka igwe kwụ otu ebe, ọ bụ akụkụ na-aga n'ihu. Yabụ maka ọnụahịa igwe kwụ otu ebe, ị na-enweta ụfọdụ geometry na-ewu ewu. - Ma uru ọzọ bụ etu obi dị ya ịrị elu.
Ọ bụ ibu oru oma, ike ike stance, taya Rolling ngwa ngwa. - Ehee Sarah, aga m ahụ gị n’elu wee chere m ebe ahụ. (Egwú dị nro) - Ma mgbe anyị bara n'ime ọghọm, m na-ekwu na mmetụta ahụ na ịrị elu.
Ọ gaghị adị ka nke ahụ, ị ​​maara, ị gaghị aga ọsọ ọsọ na mgbada dịka ọ bụla ụkwụ igwe kwụ otu ebe ọzọ.- Mana nke ahụ na-agwaghị ekwu.- Ee.
M na-ekwu, ọ bụ ka a downside - ọ bụ ka a downside. Mana echere m na enwere ike ịmeghe ọtụtụ ikike igwe kwụ otu ebe naanị site n'itinye oche na-abaghị uru na igwe kwụ otu ebe - agbanyeghị, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịga ngwa ngwa, ị kwesịrị ịkwalite na oche nchekwa mmiri. - Eeh.
Ihe ozo anyi gha ekwuru banyere Sarah, etiti a nwere otutu ihe di nma. Echere m na ọ bụ ihe kasị mma na-achọ igwe kwụ otu ebe si ebe a. Ọ naghị abịa ọtụtụ nchekwa etiti ya ka ị wee tinye ụfọdụ dịka i mere. (egwu dị nro) Ọ dị mma.
Oge erugo iji BMC mechie ya ebe a. Sarah kedu ihe i chere? Gini bu echiche ikpe azu gi banyere ihe a? - Ọfọn, BMC na-akwalite igwe kwụ otu ebe a dị ka igwe kwụ otu ebe ịchọrọ ịchụ ụfọdụ ndekọ ugwu, gaa agbụrụ agbụrụ obodo gị, m ga-ekwukwa na ha hụrụ. Nke a bụ kpọmkwem ihe m, ị maara, ga-akwado enyi m ma ọ bụrụ na ha chọrọ ịbanye na agbụrụ mba na-agbaji akụ, yana o nwere ọnụọgụ geometry dị mma, gbakwunye mpempe akwụkwọ a ma ị nwere ike itinye agbụrụ mba ọ bụla ma nweta na elu n'ezie ngwa ngwa na a mmanya ugwu lockout, ụzọ bike.
Dịkwa mma, yabụ na ọ bụ maka BMC Abụọ Stroke AL ​​Otu. Nọrọ na-ege ntị maka isiokwu ndị ọzọ na mkparịta ụka okpokoro gburugburu. Anyị ga-ekwu maka otu igwe kwụ otu ebe a siri tụọ ha karịa, hụ na ị masịrị ha ma denye aha na anyị ga-ahụ gị n'isiokwu na-esonụ. (Egwú dị nro)
Kedu ihe igwe kwụ otu ebe BMC na-anọchi anya ya?
Igwe kwụ otu ụlọ ọrụ
BMC kwụrụ makaIgwe kwụ otu ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na nke ahụ bụ ihe anyịEmeKachasị mma. Ma maka ụzọ, track, ma ọ bụ nzọ ụkwụ, ọkachamara na-eme egwuregwu ma ọ bụ ngwụsị izu warrior, ọ bụ anyị ozi na-emepụta ihe kasị mma igwe kwụ otu ebe ọ bụla na klas.
Mmadu na eti mkpu na pusi o no. (ọchị) - Marble na-alọta - Marbles bụ ezigbo aha, amaara m na m na-eche banyere ya. (egwu obi ụtọ) - Hi onye ọ bụla, anyị nọ ebe a na Sedona, Arizona maka njem njem Pinkbike 2020.
Abụ m James Huang, Global Tech Editor maka nwanne nwanyị CyclingTips. Anyị nọ na Mike Kazimer, Mike Levy, anyị na-ekwukwa banyere igwe kwụ otu ebe n'okpuru ụdị $ 3,000, Commencal META TR, Santa Cruz Hightower, na YT Jeffsy, mgbe ahụ anyị nwere hardtail, Norco Torrent . Ndị be anyị, kedụ ihe unu chere maka igwe kwụ otu ebe a? - Ha niile bụ ezigbo nhọrọ siri ike maka n’okpuru $ 3,000.
Enweghị ezigbo ọnụ ahịa. Ee, Echere m banyere ụdị dị ọnụ ala, igwe kwụ otu ebe bara uru $ 2,000 na n'okpuru, enwere ụfọdụ ihe ịtụnanya. Mana n’ebe a, $ 3000 kwesiri igwe igwe ndị a niile na-arụ ọrụ nke ọma, na m na-ekwu na ha na-eme. - Yabụ kedu ihe kachasị amasị gị mgbe ahụ? - Ya mere, n’ime anọ ahụ, enwere m ike ịdabere na mpaghara Meta geometry na-arụ ọrụ kachasị mma maka m, ọ kachasị sie m ike.
Ee, ị nwere ike ịnweta karama abụọ na ya, ị maara ihe m chere banyere nke ahụ. - Ọ gaghị aka mma ma ọ bụrụ na i nwere atọ? - Ọ ga-aka mma, ma ọ bụ anọ.- Ọ bụrụ na ị nwere ike ịme otu igwe kwụ otu ebe na anọ.- Ee, ọ bụrụ naanị.- Ọ bụrụ naanị.- Ee, echere m na m nọ n'otu ibe ahụ, anyị ga-ekwenye n'ụzọ ụfọdụ A ole na ole ọtụtụ ihe m chọrọ.- Ọ bụ weirir m maara.- ma yeah, na commencal guzoro m onwe m, dị nnọọ a siri ike obere tank nke a igwe kwụ otu ebe.
Know maara na ọ bụ njem 130 nke njem, mana ọ na-adị ka karịa. Ma ọ na-agbada nke ọma, na-arị elu nke ọma, ihe ọ bụla ịchọrọ. Na price bụ ezigbo mma kwa. - Geometry mara ezigbo mma n'oge ahụ? - Ee, yabụ na ịmara igwe kwụ otu ebe niile na ụdị ahụ, igwe kwụ otu anọ ahụ, nke ọma, belụsọ ịgagharị, ọ bụ ntakịrị ihe karịa, mana ọnụọgụ ndị a niile dịka otu ebe.
N'ihi ya, ọ bụ ihe banyere otú igwe kwụ otu ebe n'ezie na-eche na nzọ, na-adabere nke ọma na ihe siri ike, na m masịrị ya - ya mere, olee nke kasị amasị gị nke ìgwè mmadụ ahụ? - Ọ bụ oku siri ike. Dị ka a ga - asị na m nwere anọ anọ n’usoro enwere m ike ijide otu wee nwee obi ụtọ. Dị ka ebe a na Sedona, iyi ga-abụ nke kachasị dị mfe ijide.
Naanị n'ihi na ọ bụ ụlọ siri ike, ogologo, ogologo hardtail. Zọ njem ebe a na-enwe ọtụtụ mgbago na mgbada na zigzags, yabụ enwere m mmetụta ịme ya. - Ọ bụghị na iyi abụghị.
Ọ dịghị mma dị ka igwe kwụ otu ebe ndị ọzọ, ọ bụ naanị mbadamba, dị arọ, ogologo igwe kwụ otu ebe. Ọ bụ 480 millimita na 64 ogo ntụgharị ihu. M na-ekwu ma ọ bụrụ na e nwere a obere larịị hardtail ọ bụ na ọ ga-adị ukwuu na a ọtụtụ ebe, dị nnọọ bụghị ukwuu a akpan akpan ọnọdụ.
Ee, ekwesịrị m ikwenye na Kazimer. Lelee nke a, Kazimer, anyị kwenyere. - Ee, iyi a nwere ndụdụ kacha mma na brek niile igwe kwụ otu ebe a nwalere.
The drivetrain bụ GX drivetrain yabụ na ị nwere ntakịrị ntakịrị ma nụkwuo mmetụta karịa ya karịa SX na NX drivetrains.- Ee, yabụ enwere nke ị ga-atụle, ị maara na ọ dị ka ị nweta draịva siri ike, yabụ na ọ bụghị maka onye obula. Ọ bụrụ n ’ịbanye n’ihe siri ike, ị nwere ike lelee igwe kwụ otu ebe a, ịnwere ike ịchekwa nnukwu ego site na ịga n’ụzọ a. - Ee, ị gaghị ewere Norco naanị n’ihi na ị ga-enwetakwu akụkụ maka ya, ị ga-ahọrọ Norco n'ihi na n'ezie ị chọrọ a hardtail - ee m pụtara otú kwesiri ngosi niile ndị a iche? - na brek na ndụdụ? ee - aka nri, maka na inwetara ihe egwu di egwu na Koodu na norco na ee. Iyi ihu ọma mma na stof ọ na-echetara gị na ọ bụ e nwere ihe dị iche. - Ọfọn, na ọnụahịa ahụ ị nwetara ọtụtụ, mana ị ka na-enye.
Enwere igwe kwụ otu ebe na otu a ịchọrọ ịla n'ụlọ, mana ikekwe anyị chọrọ ịkwalite ihe ole na ole ma emechaa. - Ee, ọtụtụ n’ime ha? Eszọ ụkwụ ụkwụ nwere mgbatị piston abụọ, nke bara ezigbo uru maka igwe kwụ otu ebe. Nweghị ike ịta ha ụta maka nke ahụ, ọkachasị ndị nwere nnukwu rotors.
Mana echere m na ndị bi n'ebe nwere oke ugwu dị oke ọsọ ọsọ, dịka mụ na Kazimer, na BC anyị na-arịgo ntakịrị ma anyị gazie ogologo ala. O nwere ike ịbụ ihe kwesiri iji brakọnụ piston anọ siri ike ma ọ bụ opekata mpe rotors - ee ha nwere nke buru ibu? Rotors dị ka Jeffsy's Commencaland ha abụọ na-abịa n'ihu rotor 200 milimita. Dị nnọọ mma ịhụ, ma ọ bụ na Commencalin nwere Ọkwa T brek karịsịa, nke ahụ bụ pistons abụọ, n'ezie Jeffsy bụ ihe dị ka $ 400 dị ọnụ ala karịa mgbe Commencal, ọ na-abịa na ndị na-eduzi anọ na-brek brek.
Ma n'ihi na m na-amasị m commencal kasị mma, ma m ga-nweta nkwalite na brekị - ihe banyere uru? Echere m, abụọ nke ndị a anyịnya igwe na-azụ ogologo ka n'ji, dị nnọọ ka anyị nwere na $ 2,000 mmefu ego Atiya. Ma ndị ọzọ nke abụọ bụ brik nkịtị igwe kwụ otu ebe. Na ihe ọ bụla ị ga - eche - Ee, n'ezie ị ga - eche maka ọrụ, dịka ọmụmaatụ ma ọ bụrụ na ịzụta ihe na ozi ezigara gị ị ga - ewu ya, ị nwere ike ilekọta ya.
Mana ọtụtụ n'ime ụlọ ahịa ndị a na-elekwasị anya ugbu a na ọrụ karịa ire ere. Ya mere echere m na enwere ihe ihere karie ugbua karịa ịbanye n'ime ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe mgbe ị nwere ike ịchekwa, kedu ka ị ga-esi ata mmadụ ụta maka ịchekwa $ 500, 600, ma ọ bụ ọbụlagodi $ 1,000 ma ka nwee igwe kwụ otu ebe ọ chọrọ ịnya siri ike. - Na ụdị $ 2,000, anyị kwuru na ọ bụrụ na ịnwere ike ijikwa iji obere narị dollar karịa, ị ga-enweta ọtụtụ igwe kwụ otu ebe.
Ndi nke ahụ ka dị ebe a? - Echere m na ọ na - adịchaghị mkpa na ị ga - eche maka ịkwalite igwe anyịnya ndị a, ha agbajisịkwa igwe kwụ otu ebe ndị a n’ime ụzọ abụọ na atọ dị ukwuu, ụdị ụdị akara okike nke ụdị ahụ mepụtara. Ma enwere otu nnukwu ọdịiche. Enwere obere ebe a karịa ka a ga-eweghachi ya.
jaket igwe na-ekpo ọkụ dị ọkụ
Dị nnọọ njikere na-aga ogologo nke igbe na ị ga-adịghị na-eche banyere swapping akụkụ ozugbo. You maara igwe kwụ otu ebe a niile m ga - asị YT Jeffsy na - enye ego kacha mma. Echere m, $ 2300 siri ike iti ka ọ nweghị ihe dị mkpa ka emelitere ozugbo, ọ na-arụ ọrụ nke ọma.
Nke ahụ bụ ihe akaebe nke ihe ị ga - enweta site na ịnara ụzọ ndị ahịa a. - $ 2300, dị ka azụ dị ka afọ ise ma chọọ ihe ị ga-enweta maka $ 2300 na amaara m na ihe niile akwagala ma ugbu a, ihe niile ka mma, mana nke ahụ bụ ihe nzuzu. Ma ị nwere ike ịzụta Jeffsy a ma ọ bụ Commencal ma na-agba ya ruo ọtụtụ afọ ma dochie taya na breeki mgbochi na mgbe ihe mebiri ma ị ga-agbaji ha.
Chọghị igwe kwụ otu ebe $ 6,000. Echeghị m na m ga-adị ngwa ngwa karị, ime ihe n'eziokwu, jiri igwe kwụ otu ebe dị oke ọnụ n'ọtụtụ ihe ndị a dị ala ebe a - Ee, ihe m na-ekwu bụ na ị ga-echekwa obere ibu ma nchikota akụkụ ahụ nwere ike ịka mma. na Formance, ị na-ekwu na n'ezie enweghi ọtụtụ ihe iji merie - ee geo bụ ihe kachasị mkpa na jiometrị dị - ọ dị mma, nke a bụ echiche anyị gbasara ụdị $ 3,000 Valueby na 2020 Pinkbike Field Trip na Sedona, Arizona , ma ọ bụrụ na ị chọrọ ọzọ pịa Idenye aha. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmata banyere gravel anyịnya igwe, lelee Ule Ule Cyclingtips anyị mere ebe a na Sedona izu gara aga.
Kedu ụlọ ọrụ igwe kwụ otu ebe kachasị mma?
10Ugwu Ugwu kacha mman'imePhilippines
Agha 590-DIgwe Ugwu.
SAVA SetịpụrụIgwe Ugwu.
Ntinye Vmax LHIgwe kwụ otu ebe.
KpakọbaIgwe kwụ otu ebeAB2006-TLS13 Ntụrụndụ Aleoca.
21-ọsọ Phoenix Ntorobịa Ngba ịnyịnya.
Egwuregwu ugwu na-agbanwe ọtụtụ ihe na akụkọ ihe mere eme nke ihe dị ka afọ 40. Enwere ugbu a ụdị ọzụzụ dị iche iche dabara n'okpuru nche anwụ igwe kwụ otu ebe. Ya mere, anyị chere na ọ ga-abụ oge dị mma ịkọwa ụdị igwe kwụ otu ebe dị iche iche na ebumnuche ha maka ojiji.
Ha na-ejikarị igwe kwụ otu ebe wuo. Nwere ike ịhụ na ọ dị ọtụtụ gburugburu eriri igwe ebe a, yana isi ihe dị mkpa, iji nweta ntaramahụhụ a. Ke adianade do, o nwere ogologo wiil ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere igwe na-agba ọsọ na-agba ọsọ na mba ma ọ bụ ya mere ọ na-adịwanye jụụ na ọsọ, nwere ike ịnya ala karịa nkasi obi, mana ebe a, ọ naghị arịgo nke ọma na post dropper, dịkwa mma atụmatụ. - Ọ bụrụ na ị dịtụkwuo ọnụ ọgụgụ ọzọ, nke a bụ ndapụta mmiri nke nde 160.
Yabụ ị nwere igwe kwụ otu ebe dị mma nke na-arịkwa elu. Ọzọkwa, anyị chọrọ ka igwe kwụ otu ebe bụrụ ihe na - eme ihe ike, yabụ na anyị nwere taya buru ibu karị, nke na - egosi ihe mgbapụ ọzọ, mana ụgwọ ọrụ ya bụ na ha dị arọ - Igwe ngagharị. Isi ihe dị n’azụ ihe a bụ na ụlọ ọrụ ka na-eji ịnyịnya ígwè 26 agba ịnyịnya ígwè, teknụzụ ochie aga ụzọ ụkwụ igwe kwụ otu ebe na igwe mgbada, mana ụmụ okorobịa a ka na-agba 26.
Ọ dịghị mkpa maka nnukwu wiil. Echere m na ọ na-eme igwe kwụ otu ebe ka ọ dị mfe ịbanye ikuku n'ihi na o nwere obere wiil. Njem dị mkpirikpi, ikekwe naanị 100 nde, naanị iji wepu nkwụsị ndị ahụ buru ibu mgbe ha rutere ike.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, ha nwere obere nguzo dị elu na obere etiti yabụ ị nwere ike ịgagharị na igwe kwụ otu ebe iji mezuo usoro aghụghọ niile ha na-eme. N'ezie oche dị ala dị ala iji nweta ya ma pụọ ​​n'ụzọ. - A igwe kwụ otu ebe igwe kwụ otu ebe.
Na mbu emezigharị wiil ndị a maka ịnyagharị n’elu aja dịka taa ma n’elu igwe. Nnukwu taya na-enye gị buoyancy ahụ. Hoops ndị a dị sentimita 4.8 n'obosara.
hitch bike ogbe
Ya mere, ha dị okpukpu abụọ. You chọghị ọbụna ebe a na-agba ịnyịnya ígwè iji bilie n'akụkụ osimiri taa. A na-ewu igwe kwụ otu ebe naanị na wiil ndị a.
Ha dị obosara nke na ihu na azụ azụ nke ndụdụ ahụ sara mbara nke ọma iji banye na nnukwu ụlọ ahụ na nnukwu taya. Ọtụtụ oge, igwe kwụ otu ebe a bụ ihe siri ike ma ọ bụ na-agbanwe agbanwe dị ka igwe kwụ otu ebe a ma ha na-ewu ewu. Can pụrụ ịhụ ndị a n’okporo ụzọ na ebe snow na ájá dị. - Downhill igwe kwụ otu ebe.
Kpamkpam oke mmachi maka ihe i nwere ike ime na nke a igwe kwụ otu ebe, nke e mere naanị maka roughest teren, n'elu na ala, ala a ugwu. Dịka ị pụrụ ịhụ, etubigara oke ókè, ruo na ndụdụ ihu, nke bụ njigide okpukpu atọ, dị ka ọgba tum tum, nnukwu taya, taya na-eme ihe ike, nke siri ike, mgbe na-enweghị tube. Narị narị abụọ njem, n'ihu na azụ, na-abụkarị ihe gbasara bọl.
Ha na-abịa n’ụdị na nha niile dị iche iche, 26-, 27.5- na 29 inch wiil. Ngwongwo ígwè, ogwe osisi carbon, o doro anya na enweghị nkwusio azụ, ha na-enwekarị ndụdụ nkwusioru.
Ya mere echefula ịhapụ ihe ị kwuru n'okpuru. Anyị na-agụ ha niile - echere m na ịchọrọ ịhụ akwụkwọ ọzọ ebe a na GMBN. Yabụ ọ bụrụ na ị pịa ebe a ị ga-ahụ edemede m na 'Nkwupụta Nkwupụta' - ma ọ bụrụ na ị pịa ebe ahụ ị nwere ike ịhụ 'Ndi Fatbikes Na-akpa ọchị?' - Ha Na-atọ ọchị? - Ha Na-atọ ọchị.
BMC ọ ka mma karịa Trek?
BMCanyịnya igwe bụ pụtara na pụrụ nnọọ iche. Ga-apụta n’etiti igwe mmadụ, ma ọ bụrụ na nke ahụ dị gị mkpa. Ha siri ike ma nwee jiometrị na-eme ihe ike ma e jiri ya tụnyere yaMee njemMadones. Nwaleenụ na-agba ịnyịnya ha abụọ, dịka m ga-akụ na ha ga-adị iche. r.
Ebee ka BMC si eme igwe kwụ otu ebe ha?
Usoro mmepụta niile - site na mmalite nke ọhụụigwe kwụ otu ebe, site nayaimewe, prototyping, ule, iterating na n'ụzọ nile ikpeazụ ngwaahịa – itịbe na anyị Impec Advanced R&D lab na Grenchen, Switzerland.
Emere igwe kwụ otu ebe BMC na China?
Akụkụ G&M Carbon na-emeBMC. Pinarello okpokolo agba bụmerenke Carbotec Industrial nke Taiwan naChina, na azụmahịa carbon kemgbe 2004.Bọchị 20 2017
Na Mee 2013,BMCkwuputara na otu ndị otu nnukwu ego dị iche iche na-enweta ego maka ijeri $ 6.9. Emechara usoro ahụ na Septemba 2013 na ụlọ ọrụ ahụbuejighi ahia ahia ndi mmadu. Ekwuputara ya na October 2, 2018 naBMCenwetara site na KKR, ụlọ ọrụ ntinye ego zuru ụwa ọnụ.
Ebee ka e wuru igwe kwụ otu ebe BMC?
Usoro mmepụta niile - site na mmalite nke igwe kwụ otu ebe, site na imewe ya, ịkọ ihe, ịnwale, ịnyagharị ya na ụzọ niile nke ngwaahịa ikpeazụ – na-eme na ụlọ nyocha Impec Advanced R&D anyị na Grenchen, Switzerland.
Kedu ụdị igwe kwụ otu ebe bụ igwe kwụ otu BMC?
Ndi Switzerland mara ugwu ha na nka. BMC jikọtara usoro a na nchọpụta sitere na ụlọ nyocha nke aka ya, pelọ nyocha Impec, iji mepụta ịnyịnya ígwè pụrụ iche.
Etu esi achọta onye na-ere ahia maka igwe igwe BMC?
BMC bụ maka onye ọ bụla Deba aha gị BMC bike Mountain BackMountain Cross-Country Trail All-Mountain All-Terrain Kids Kedu aha m? Nwalee igwe kwụ otu ebe Chọta onye na-ere ahịa BMC bụ maka onye ọ bụla Deba aha gị BMC igwe ndụ ibi ndụ BackLifestyle Road Sport All-Track City Kedu aha m? Nwalee igwe kwụ otu ebe Chọta onye ahịa BMC maka onye ọ bụla Deba aha gị BMC E-Bike AMP
Kedu mgbe BMC bidoro ịme igwe ịnya oge?
BMC jikọtara usoro a na nchọpụta sitere na ụlọ nyocha nke aka ya, pelọ nyocha Impec, iji mepụta ịnyịnya ígwè pụrụ iche. Kemgbe 1994, BMC ụzọ igwe kwụ otu ebe, igwe kwụ otu ebe na oge ịgba ịnyịnya ígwè enweela mmeri agbụrụ dịka Tour de France, asọmpi ụwa na ọzụzụ dị iche iche na ọtụtụ asọmpi Ironman.